04/06/2018 - Page 3 sur 5 -
Faritra Ihorombe : Nahazo fotodrafitrasa maro tamin’ny fitondram-panjakana
Isan’ny faritra iray nisitraka tombontsoa maro aram-pambolena teo amin’ny lafin’ny fotodrafitrasa vitan’ny fitondram-panjakana, tarihin’ny Filoham-pirenena ny tany amin’ny faritra Ihorombe. Nankasitraka ny zava-bitan’ny fitondram-panjakana noho izany ny lehiben’ny faritra, ingahy Moussa Fernand manoloana ireo tombontsoa …Tohiny
Fiarovana ny mpanjifa : Hisy ny fitsirihana ny fivarotana ny hani-masaka
Tsy handefitra manoloana ny fikirakirana sakafo amidy etsy sy eroa ny minisiteran’ny Fahasalamana. Io no fantatra sady nohantintraterina tao anatin’ny fankalazana ny androm-pirenena ho an’ny fampiroboroboana momba ny sakafo azo antoka sy tsara kalitao, izay …Tohiny
Andakana Ambohidratrimo : Zanaka karana nalaina jiolahy an-keriny
Raha mbola eny am-pelatanan’ireo jiolahy i Navage Veldjee, dia efa nitrangana kidnapping vaovao indray tany amin’iny lalam-pirenena fahefatra iny omaly tokony ho tamin’ny 04 ora tolakandro. Araka ny voalaza, dia teo amin’ny Golf Andakana no …Tohiny
Alakamisy : Tafaverina ny omby 11, dahalo roa matin’ny zandary
Nitrangana fanafihana mitam-piadiana indray tao amin’ny fokontany Soamatamana kaominina Alakamisy Anativato. Dahalo 9 lahy no nanao ny fanafihana, maty lavon’ny zandary ny roa tamin’ireo dahalo, tafaverina ny omby miisa 11. Ny alin’ny sabotsy tokony ho …Tohiny
Nihaona voalohany tamin’ ity iraka ambonin’ ny vondrona Afrikanina Ramtame Lamamra ity omaly maraina ny Filoham-pirenena Malagasy, Hery Rajaonarimampianina tetsy amin’ ny lapam-panjakana Iavoloha, izay nahitana ihany koa ny solontena maharitry ny vondrona afrikanina eto ...Tohiny